Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Taiwan Expo laghachiri na Malaysia
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Mmelite nke Njem njem
Taiwan Expo laghachiri Malaysia na-eso nmịpụta mkpụrụ bara uru n'ime afọ abụọ gara aga na Kuala Lumpur. Afọ a, Taiwan Expo 2019 ga-eme njem Penang, na 5th na 6th nke July iji gbasaa iru ya nye ọtụtụ ndị Malaysia. Taiwan Expo 2019 ahọrọla ihe ngosi ihe ngosi isii ahaziri iche Penang si roadmap mmepe. Isii isii a gụnyere ụlọ ọrụ 4.0, Green Technology, Medical Care, Halal Products, Fashion, Culture & Tourism.
Onye nhazi ihe omume Bureau of Foreign Trade na TAITRA na-ewu Taiwan Expo kemgbe 2017 dị ka ikpo okwu maka ndị Malaysia ịmụtakwu banyere Taiwan, na ihe ruru 88% nke ndị ọbịa egosila na ha chọrọ ịga Taiwan n'ime afọ. Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa 42,000 sonyere na mmemme afọ ndị gara aga, ma duga n'usoro azụmahịa bara uru ụfọdụ USD 86 nde.
N'afọ a, Taiwan Expo na-eweta ihe karịrị ndị nrụpụta 100 gafee ụlọ ntu 110 maka ihe ngosi ahụ. A na-ahọrọ pavilions isiokwu 12 na mpaghara ngosi abụọ iji gosipụta ike nke nyocha na mmepe klas ụwa nke Taiwan, ikike mmepụta, na ịre ahịa ahịa. Were Smart & Greentech dịka ọmụmaatụ, Taiwan si na-eduga ọnọdụ na ụlọ ọrụ Industry 4.0, smart healthcare, smart retails yana obere carbon, usoro nchekwa ike maka obodo nwere ọgụgụ isi.
Fọdụ ọrụ nlekọta ahụike gụnyere ọgwụgwọ ọhụrụ nke ọrịa PhotonTherapy, ụmị ọkpụkpụ na ọgwụgwọ cell, iko ọgwụ ahụike mbụ nke ụwa nwere ike belata oke nsogbu site na ịwa ahụ ọkpụkpụ, igwe izipu ọgwụ izizi nke ụwa nke na-achọghị ntinye ọzọ karịa mmiri. ihe ngosi Taiwan si nlekọta ahụike dị elu.
Na mgbakwunye, Taiwan Halal & Afụ Tea Pavilion ga-ewusi mmekorita oru na Malaysia nwere na Taiwan siindustrylọ ọrụ Halal site na igosipụta ngwaahịa kacha mma nke ndị Taiwan kwadoro maka Malaysia. Ihe omume ichoro n’oge ngosi a gụnyere Oge Taiwan Halal Bubble Tea Sharing Session na nri Nyonya na-atọ ụtọ iji Taiwanese halal Efrata nke Penang Celebrity Chef Nurilkarim na-achị.
Ihe omume n'oge ngosi a gụnyere nzukọ azụmahịa, nnọkọ akụkọ, nzukọ ọmụmụ, ngosipụta ngwaahịa, na mmemme ọdịnala iji gosi ndị Malaysia na njem nlegharị anya Taiwanese, agụmakwụkwọ, omenaala na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
A ga-eme Taiwan Expo 2019 na 5th na 6th nke July na Setia SPICE Convention Center, Penang.